The environmental crisis you never even heard of? သင်တခါမှ မကြားဘူးသေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိုင်ရာအကျပ်အ
သဲသယံဇာတသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့်လျော့ပါးလာပြီဖြစ်သည်။ ပို၍များလာသော အသုံးပြုမှု များကြောင့် သဲထုတ်ယူသုံးစွဲမှုသည် ယခုအခါတွင် “အရင်အချိန်က သင်တခါမှ မကြားဘူးသေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆုိုင်ရာအကျပ်အတည်း” တစ်ခုဖြစ်လာပါသည် (1)။ ယခုအကြောင်း အရာကို ၂၀၁၄ UN အစီရင်ခံစာတွင်လည်း ကမ္ဘာတ၀ှမ်းနှစ်စဉ်အသုံးပြုသော သဲပမာဏသည် ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ရှိသောမြစ်ကြောင်းများမှ နှစ်စဉ် ပံ့ပိုးပေးနုိုင်သော ပမာဏထက် နှစ်ဆမြင့်မားသည် ဟုဖော်ပြထားပါသည် (2)။ မတ်လ ၂၉ ၊ ၂၀၁၉ သောကြာနေ့တွင် UNEP မှ ၂၀၁၉ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ရာတွင် ကျွန်တော် ကျွန်မတို့အနေဖြင့် ယခုအကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနုိုင်ရန် ခြေလှမ်းများ စကိုစတင်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ကျွန်မအနေဖြင့် သံလွင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် ၁၀နှစ် နီးပါးသုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။ လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်ခန့်မှစတင်ကာ ပို၍များပြားလာသော သဲ၊ ကျောက်စရစ်များ၊ နုန်းထုတ် ယူသည့် စက်လှေများကို တွေ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် သံလွင်မြစ်ဘေးတွင် တည်ရှိသော ကရင်ပြည်နယ် ဖားအံမြို့နားတွင် ပိုတွေ့ရပါသည်။ ဒီတော့ ကျွန်မအနေဖြင့် ဒေသခံများကို အပြောင်းအလဲများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းများမေးခဲ့ပါသည်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက ဒီသဲတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မဦးဆောင်ပြုလုပ်နေသည့် သုတေသနအရ သဲထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဒေသခံများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများကို အလွန်ထိခိုက်မှုရှိသည်။ နဂိုမူလပုံသဏ္ဍာန်အနေအထားရှိသည့် သဲသောင်ပြင်ကိုမှီခိုနေရသည့်သူများအနေဖြင့် ထိုနေရာများမှ ရွှေ့ပြောင်းရန် ဖိအားပေးခံရသည်၊ ထို့အပြင် (သို့မဟုတ်) ၄င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းလမ်းကို ပြောင်းလဲရသည်။ ထိုထဲတွင် သံလွင်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် မြစ်ကမ်းဘေးဥယာဉ်ခြံမြေစိုက်ပျိုးသူများသည် သဲတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် သဲသယံဇာတကို အပြိုင်အဆိုင်ရယူနေရသကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။
ယခုအကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် မြန်မာပြည်တွင်သာ ထင်ရှားသည်မဟုတ်ပဲ စင်ကာပူနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနုိုင်ငံများတွင်လည်းရှိနေသည်။ မြို့ပြတိုးတက်ရေးအတွက် သဲထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်း သည် မြစ်ကြောင်းဂေဟစနစ်များနှင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းရှိ ယင်းတို့အပေါ်မှီခိုနေရသူများ အပေါ် အလွန် ထိခိုက်စေပါသည် (UNEP 2014)။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းဟုသာ ညွှန်းဆိုလေ့ရှိပြီး မည်သည့်သုတေသနမှ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၁.၇၁တန်ဖိုးရှိသည့် ကမ္ဘာ့သဲကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၏ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များကို ထုတ်ဖော်မှုမရှိပါ။ လက်တွေ့တွင် သန်းချီသော လူများ၏ (အထူးသဖြင့် အာရှဒေသရှိ) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ သဲသယံဇာတအပေါ်မှီခိုနေရကာ လက်လှမ်းမှီနိုင်အောင်ယှဉ်ပြိုင်နေရပါသည်။ သဲအသုံးပြုမှုများလာသည်နှင့်အမျှ ထိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာပါသည်။ ထို့အပြင် သဲသယံဇာတမှာလည်း လုံးပါးပါးလာပြီဖြစ်သည်။
Sand is running out. Asaconsequence of increased demand, sand mining is now “the global environmental crisis you’ve probably never heard of.” This is underlined ina2014 UN report showing that annual global consumption of sand now more than doubles the yearly amount supplied by rivers globally. Friday, March 29, 2019, the UNEP released their 2019 report which states that we must take steps to address this crisis.
I have been conducting research on the Salween or Thanlwin River for nearly 10 years. What I noticed over past five years or so are the increasing number of sand boats, extracting sand, gravel, and sediments from the river. This is particularly true around the city of Hpa An, sited along the Thanlwin River, in Karen State. So, I started asking people about the changes and impacts. Also, where is this sand going?
A new research paper that I led presents evidence that sand extraction greatly impacts people’s livelihoods: those who rely on sand in its original form are being forced to move and or transform their livelihoods. This includes riverbank gardens along the Salween who now must compete for sand with sand mining operations.
These impacts, however, are not only evident in Myanmar, but also in Singapore and Cambodia. Sand extraction for urban development is causing harm to river systems and those who depend on them around the world (UNEP 2014). Though described as an environmental crisis, no research explains the social and environmental dimensions of the global trade in sand (worth US$1.71BIL p.a.). But, millions of people’s livelihoods, particularly in Asia, also rely on and thus compete for sand. These livelihoods are being impacted by the dramatic rise in demand, and, sand is running out.
Thoughts: what should we do?
References: 1) Beiser, V. 2017, Feb 27. Sand mining: the global environmental crisis you’ve probably never heard of. Guardian. 2) Sutherland, W.J., Barnard, P., Broad, S., Clout, M., Connor, B., Côté, I.M., Dicks, L.V., Doran, H., Entwistle, A.C., Fleishman, E. and Fox, M., 2016. A 2017 horizon scan of emerging issues for global conservation and biological diversity. Trends in ecology & evolution 32(1): 34-40.
The post is based onaco-authored paper, “Trading sand, undermining lives”: https://www.tandfonline.com/epri…/5JBDW6aj9sgDCQTupvrJ/full…
UNEP report on sand crisis: 2014 http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8665
UNEP report 2018: https://www.unenvironment.org/annualreport/2018/index.php…
Photo credit to Vanessa Lamb